ZEMKLUNIK: NOOCYADA UGU CAANSAN LEH SAWIRO - SOOSAARKA DALAGGA
Sharaxaad iyo sawirro noocyo caan ah oo ka mid ah qalabka dhulka
Tobankii sano ee la soo dhaafey, dadka degaanka xagaaga iyo mulkiilayaasha shakhsiyaadka gaarka ah, sida berry sida mulkiilaha ayaa noqday mid caan ah. Faa'iidooyinka waxay yihiin caabbinta barafka, u nugulaanta cudurada iyo carafka aan caadiga ahayn.
Magaca "strawberry" waxaa laga soo qaatay ereyada "strawberry" iyo "strawberry", berrigan waxaa la helay isagoo ka gudbaya awoowayaashooda waxayna nuugeen tayada ugu wanaagsan ee strawberry-strawberry. Iyadoo aan ka reeban, dhammaan noocyada dhulka ee, ayaa lagu kala gooyay duurka u awood badan, miraha ay u muuqdaan kuwo la mid ah strawberries iyo leeyihiin hooska ah guduud.
Sannadaha hore, berry strawberry waxay ka weyn yihiin celceliska strawberry (20 garaam ama ka badan), laakiin waqti ka dib waxay hoos u dhigaan miisaanka celcelis ahaan 6-8 garaam. Waxyaalahaas waxaad ka heli kartaa noocyada ugu caansan ee dhulka leh sawir.
Waxaa loo tixgeliyaa noocyo kala duwan oo cusub oo dhulka hoostiisa ah, kaas oo la baddalay qeybtii labaad ee 80-kii qarnigii la soo dhaafay. Khudradda "Kupchikh" waxay leeyihiin muuqaal cylindrical ah. Dhanka kale, waxay eegaan wax yar oo la qalajiyey, laakiin noocyada kala duwan ee nooca berry dhadhanka macaan iyo casiir leh. Dhalashada dhulalka "Kopchikha" (300 g oo ka mida baadiyaha) laguma magacaabi karo sarre, taas oo ka badan magdhow oo ay bixiso bandhig fiican iyo (12-20 g) berry, faa'iidooyin dheeraad ah ayaa ah dhammaystir difaac buuxa ee cawska iyo caarada.
Ma taqaanaa? Cagaarshow waxay ku koraan maahan oo kaliya duurka - meelaha ku yaalla gobollada Hindiya iyo qaybta koonfurta ee China, New Zealand iyo Australia waxay ku koraan geedo strawberry.
Noocyada noocan oo kale ah ayaa si siman loo arkaa sida roobka iyo kuleylka, oo leh heer korodh ah. "Raisa" kama baqanayo dhaxan guga dhulka iyo hawada, duurka ee kala duwan ee kala duwan ee Bloom aad u badan. Miraha of this kala duwan yihiin qaabka oval-konik ah, aad u adag tahay taabashada iyo aad u macaan dhadhan, caraf udgoon "Raisa" waa strawberry daahir, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon u samaynta macaanka. Soo bixidda dhulalka "Raisa" - 350-400 g halkii baadiyaha, miisaanka miro wuxuu gaaraa 25 g.
Zemclone waa iskudhaf caws iyo strawberries; Yoshta waa dhexjir ah currant madow iyo miro yar; Blackberry waa blackberry iyo raspberry, iyo hybrid of khudaar, tubta iyo fersken waa sharafuga quruxsan.
Kala duwanaanta noocyada dhulka ah ee goobaha CIS waa mid aan si ballaaran loo qaybin, waxaa sidoo kale jira macluumaad yar oo ku saabsan. Cuntada waxay ka timid 250 illaa 350 g oo baadiyaha ah, oo leh miisaan yar oo ah 10-15 g. Waxay dareemeysaa weynaansho qoyaan badan iyo qadar yar oo qorrax leh, sidaas darteed waxay caan ku tahay dadka reer Ruushka ah.
Ma taqaanaa? Berriga ugu weyn ee cawska miisaanka culeyskiisu yahay 250 garaam ayaa ka kortay beeraley reer Japan Koji Nakao oo ka soo jeeda magaalada Japan ee Fukuoka, cabbirkeedu wuxuu ahaa 8 × 12 x 10 cm.
Laga soo bilaabo noocyada dhexe-hore hore ee dhulka, waxay si toos ah u muujisay labada safar dhexe iyo gobollada koonfurta. Burburka geedaha waa mid dhexdhexaad ah, cabsi mira dhalid xittaa xaaladaha cimilada xun. Midhaha maadada dhirta caleemaha ee Penelope ayaa yar yar marka loo eego noocyada kale ee dhoobada dhulka. Penelope kama cabsiiso cudurada fangas. Weevils ayaa ah khatarta ugu weyn ee kala duwanaanshaha, laakiin xitaa khasaaraha kuwan ka badan lacageed ee dhalidda sare (250-280 g halkii baadiyaha).
Guud ahaan tufaaxa strawberries iyo strawberries ayaa la soo saaray oo ay soo saareen beeraha Ruushka. Cawska ee muddada dheer ee fruiting, yar yar, udgoon iyo midho cajiib ah macaan. Midhaha waxay leeyihiin qaab muuqaal dhaqameed leh, dhaqanka ayaa difaacaya baraf, kallana, fungus iyo caarada strawberry. Wax soo saarka - 300 g ka soo baadiyaha, muddada Bisaylkiisa - qeybtii labaad ee July.
Waa muhiim! Si loo gaaro dhalidda ugu badan, mulkiiluhu wuxuu u baahan yahay in la quudiyo laba jeer sannadkii - guga iyo dayrta.
Waxaa macquul ah noocyada ugu caansan - Diyuutarrada Diana waxay yihiin kuwo sarreeya, iyo berry waa oval, miisaankoodu wuxuu gaari karaa 20-25 g.Waxay leedahay dhadhan aad u fiican, taas oo ka dhigaysa bakeeriga alaabada aan lagama maarmaanka u ah cunto karinta iyo saxarada. "Diana" waxay miro ka soo baxdaa dabayaaqada Juun ilaa horraantii Agoosto, taas oo ah sababta ay ugu weyntahay munaasabadaha sare.
Mid ka mid ah noocyada ugu qabow aan la qabin, berri aan la kala soocin by ay size weyn, laakiin waa mid aad u macaan leh dhadhan qoyan la cayimay. Nooca midhaha "Finds" wuxuu aad u la mid yahay strawberries, waana mid shuban. Miraha "Nakhodka" laga soo bilaabo dabayaaqada June ilaa bartamihii July.
Khubarada ayaa sheegaya in dhalidda sare (ilaa 450 g halkii baadiyaha) ee noocyada kala duwan, ay duurka yihiin aad u dheer, oo arrintani waxay dareenaysaa naftooda. Qaababka miraha waxaa lagu soo koobay-furan, waxay noqon karaan ilaa 30 xabbadood oo baadiyaha ah, miraha "Rajada Zagorje" waa midab casaan ah oo casaan ah waxaana lagu daboolaa dusha sare ee berrinka leh shabaqa adag. Dhadhanka this berry casiir leh iyo cayayaanka elastic leh dhadhan kala duwan oo nutmeg, miraha laga bilaabo dabayaaqadii Juun ilaa horraantii Julaay
Waa muhiim! On carradu culus, sida clayey, dhul dhulgariir ah u koraa si liidata. Dhismaha dhoobada, sameynta lakabyo is dulfuulan, wuxuu awoodaa in uu haynayo qoyaanka muddo dheer, taas oo horseedaysa leexashada xididada.
Tall iyo dhirbaaxo, dhaqan ahaan waxay u adkaystaan ​​dhaxan iyo isbedelka heerkulka degdega ah. Kajireyaal badan oo ubax ah iyo tiro badan oo ah miraha. Berryadu waa midab casaan ah, mid adag, oo casaan ah, oo udubdhaqaaq leh, ku hay cawska muddo dheer. Waxyaabo badani waxay u baahan yihiin daryeel waqtigooda ah - waraabinta iyo bacarimiso. Ripens goor dambe - dhammaadka July.
Waxaad baraneysaa beerista geedaha strawberry sida "Mara de Bois", "Honey", "Clery", "Eliana", "Queen", "Maxim", "Kimberley", "Chamora Turusi", "Malvina", "Festival", " Rabbi "," cabbirka Ruushka ".
Kala duwan Tani waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dhexdhexaad ah, duurka u kala geddisan yihiin peduncles awood leh, ka dib caleemaha kuwaas oo ku dhowaad aan la arki karin. Berry waa mid aad u weyn waxayna gaari kartaa tiro dhan 30 g, waxay ku kala duwan tahay ugxan-dabiiciga ah oo leh dabeecad iftiin leh. Kala duwanaanta noocaan ah, sida dhammaan dadka kale, ayaa daciif u ah cayayaanka iyo cudurada.
Zemklonik waxaa lagu qiimeeyaa dhadhanka aromatiska leh dheelitir wanaagsan, dhalid sare (0.3-0.4 kg oo ka timid baadiyaha), caabbinta baraf sare oo aan qabyo ahayn, waxay si fiican u dulqaadanaysaa gaadiidka muddada dheer waxayna si fiican u ilaalineysaa bandhiggeeda. Zemklunik waa bamka fiitamiinka dhabta ah, miro yar yar wuxuu leeyahay qadar badan oo ah unugyada raadraaca, beta-carotene, fitamiinnada kooxaha E iyo C. Berry waxaa lagula talinayaa in lagu isticmaalo hypertension, turjubaanka, arthritis iyo rheumatism. Zemclone waa raad dhab ah iyo guusha-guuleysta beerashada beeralayda iyo dadka degaanka xagaaga kuwaas oo doonaya in ay soo baxaan noocyo cusub dhirta aan caadiga ahayn oo qiimeeya waqtigooda.